Baaritaanno lugu sameeynayo qaar ka mid ah safaaradaha Iswiidhan ee dibadda | Somaliska
Qaar ka mid ah safaaradaha Iswiidhan ee ku leeyahay dibbadda, ayaa baaritaano ka socda, ka dib markii ay soo baxeen warar sheegaya in lacago laaluush ah laga qaato dadka safafka ugu jira dalabyadooda, kuwaas oo la sheegay in qaarkood ay muddo dheer ku qaadato wareysi ama interfiyuu lala sheeyo .
Arrintan ayaa timid ka dib markii teleefeyshinka Iswiidhan iyo raadiyo Iswiidhan ee Ekot ay bbarnaamijyo u kuuragalid ah oo ay sameeyeen ku ogaadeen in uu jiro laaluush laga qaato dadyowgaaasi safka ugu jira interfiyuu-ga.
Danjiraha Iswiidhan u fadhiya magaaladda Camaan ee dalka Urdun, Erik Ullenhag ayaa sheegay safaaradda gudaheeda ay wadaan baaritaano hoose baaritaano kiisas sheegayo in iibso safafka fiisayaasha. Wuxuu sheegay in arrintaasi aaneey weli u cadeeyn cida safaaradda ka howlgasha oo lugu tuhmayo.
“Weli nooma sugna cidda bixisay lacago mana ogin cid safaaradda ka howl gasha oo lugu tuhumayo” ayuu yiri Ullenhag oo misna hadalkiisa intaas ku daray in dad dibadda ka jooga safaaradda ay lug ku yeelan karaan. Wasaaradda arrimaha dibadda iyo laanta socdaalka Iswiidhan ayaa loo soo gudbiyey dhawaan xoggog sheegaya in safaaradaha ku yaala, magaalooyinka Camaan, Khartuum iyo Ankara in lacago laaluush ah laga qaato dadyoowga safka ugu jiro interfiyuuga kuwaas oo doonaya ineey eheladooda ay dib u la midoobaan. Hase ahaatee ay Ekot iyo teleefeyshinku ay xogahaasi heleen.
Danjiraha Khartuum u fadhiya Iswiidhan, Hans Henric Lundqvist, ayaa sheegay in dhinacoodu ay soo gaareen warbixinada la xirriira laaluush-ka. Hase ahaatee ay si taxadar ah u qaadaan dalabka fiisayaasha. Sidoo kalena ay baaritaano loogu kuuragalayo arrimahaasi ay ka bilaabeen gudaha safaaradda. Wuxuu farta ku fiiqay in arrimaha laalush qaadasha ay yihiin kuwo halis ah.
Dhinaca kale wasaaradda arrimaha dibadda iyo laanta socdaalka oo kaashanaya afar danjireyaal iyo qunsulo ayaa baaraya wararka la xirriira laaluush-yadda. Balse safaaradaha Ankara iyo Khartuum ayaa u muuqda kuwo aan laga helin wax qalad ah ama laaluush qaadasho ah. Halka weli safaaradda Camaan ee Urdun ku socdaan baaris xoog leh. Islamarkaasina dacwad laga gudbiyey sida ay warkan xaqiijisay Sofia Karlberg, oo ah madaxa warfaafinta u qaabilsan wasaaradda arrimaha dibadda.
Dhawaan ayaa idaadaha raadiyo Iswiidhan qeybteeda wararka qaabilsan ee Ekot oo kaashaneeysa telefeyshinka Iswiidhan shaaciyeen warar sheegaya in safaadaha dibadda Iswiidhan gaar ahaan dalalka Urdun, Suudaan iyo Turkiga, dadka eheladooda dalabaday si ay dib ula midoobaan laga qaato lacago laaluush ah oo lugu soo hormarinayo safka dheer ee loogu jiro dalabka. Ugu dambeyntiina tan iyo markii wararkaasi soo baxeen waxaa wasaaradda arrimaha dibadda Iswiidhan biloowday baaritaano lugu xaqiijinayo amuurtaasi.
Swedish badan oo taageersan qaabilaada qaxootiga